Rag Madaxtooyadda Somaliland u dirtay inay dilaan Gudoomiyaha Wargeyska Hubaal oo la qabtay! Fadeexad weyn iyo faahfaahin
Top:-Rag Madaxtoyada Somaliland u dirtay inay dilaan Gudoomiyaha Wargeyska Hubaal oo la qabtay! Fadeexad weyn iyo faahfaahin
26 April 2013 Waagacusub.com-Guddoomiyahii wergeyska madaxa banaan ee HUBAAL ayaa la gaadhsiiyey dhaawac waxaana xaruntii wergeyskaasi lala dhacay rasaas ka dib markii laba nin oo wejiga u duubtay sida Al-Shabaab oo ku hubaysan baaskoolado iyo hubka fudud ay abaaro 21:00 habeenimo (Xalay) weerar ku soo qaadeen xarunta wergeyska oo ku taalla agagaarka hotelka Togdheer una dhaw laagta Goljano ee caasimadda Hargeysa.
Labada nin ee doonayay inay dilaan Gudoomiyaha Wargeyska Hubaal Mohamed Calooleey ayaa nin ka mida gacanta lagu dhigay hasse yeeshee ma rumeeysan kartaa in ninkaasi laga soo diray Madaxtooyadda Somaliland uuna la dhashay Madaxa Gaadiidka Madaxtooyadda.
Ninka la qabtay oo loo gacan geliyay ayaa la dhashay Madaxa Gaadiidka Madaxtooyadda Somaliland ,nin lagu magacaabo Abshir Hassan oo u dhashay beesha ARAB ahaana Darawalkii Marwo Huda Barkhad.
Ninkaan oo xilligii Dahir Reyale Kaahin u basaasi jiray Xisbiga Kulmiye ayaa lagu xasuustaa inuu qoray Warbixinadii ugu darnaa ee lagu caayi jiray HUDA BARKHAD ilaa uu ka sheekeeyay keeyshaligeeda.
Ninka la qabtay wuxuu boliiska u sheegay in weerarka Mohamed Calooleey la xiriiro hadal warbixin uu ka qoray Wiil uu sodog u yahay Madaxweyne Siilaanyo kaas oo lagu magacaabo Baashe Cawil kuna tagri falay gaadiid Hayáda nabadsugida loogu deeqay.
Labada nin oo mid baxsaday waxaa gacanta ku dhigay dhalinyarada Xaafadda Goljano,wuxuuna ujeedkoodu ahaa inay khaarijiyaan Mohamed Calooleey oo ka tirsanaan jiray Ciidamadda Sirdoonka Somaliland xilligii Dahir Reyale Kaahin.
Mohamed Calooleey waa nin Wargala oo Wargeyskiisa aad looga qeeyliyay warbixinada uu faafiyo darteed.
“Waxaan maqlaayey rasaas iyo qaylo ka dhacday xarunta wergeyska, inyar ka dibna waxaanu aragnay laba nin oo ka soo baxaya kolna ku noqonaya afaafka hore ee xarunta wergeyska, dabadeedna haddana waxaa si daran doori ah loo riday rasaas nool markaasan gartay in weerar lagu soo qaaday wergeyska” ayuu u sheegay Halbeegnews nin dhalinyara ah oo degen xaafadda Goljano ee caasimada Hargeysa.
markii weerarku dhacay ayaa labada nin ee weerarka soo qaaday oo aad u jahawareersani waxay isku dayeen inay baxsadaan balse mid ka mid ah ayaa waxaa gacanta ku dhigay dhalinyarada xaafadda Goljano oo ka qaaday baskooladdii uu watay isla markaana ku wareejiyey ciidamadda Booliiska.
Guddoomiyaha wergeyska HUBAAL Maxamed Cabdi Jaamac Caloolay ayaa muddaba waxaa ay henjabaado kaga imanayeen xubno ka tirsan xukuumadda Siilaanyo oo nidar ku maray inay dilayaan.